Maxay salka ku haysaa Colaadda Ceel-afwayn. Sideese Xal-Waara loogu heli karaa : Lafo-gur Qoto Dheer ???
Sunday July 08, 2018 - 19:05:39 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Ogow xalka oo laysku dayo inay ka horayso daraasadu , waana bar bilowga xalka....
Ceelafweyn (Burcoonline) 08.07.2018 Waxaase lagama maarmaan ah in aan mililka dusha laga dhayin laakiin hoos loogu dhaadhaco.....
Waxaan dhegaystay shirkii Jaraa'id ee uu qabtay. Suldaan Maxamed Cabdiqaadir: Isagoo ka hadlaaya shir la qabanaayo. Ayaa waxa uu yidhi. Shirkaasi wuxuu ahaa Shir loogu talo-galay in Dagaal Cad lagu qaado, Dadka meesha joogay (Shirka) waxa ku jiray kuwo Xamar ka yimid, Qaarna dibadda ayay ka yimaaddeen, qaarna gudaha ayay joogeen, laakiin markaad waxaba isku darto Wuxuba waxay ka tirsan yihiin Xisbiga WADDANI.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, "Arrintaasi kuma lug lihi, dhibaato Somaliland gaadhana intii hore ayaa nagaga filan ee na soo martay. Ninka Doonaya inuu Colaad cusub abaabulo waxaan leeyahay kaa yeeli mayno.”